myanmar – OOTDMYANMAR
NEW OOTDMYANMAR-EZINE ISSUE IS UP!
No Comments on NEW OOTDMYANMAR-EZINE ISSUE IS UP!
OOTDMYANMAR-EZINE ရဲ့ အပိုင်းသစ်ထွက်လာပါပြီ !
Hello, loves! How are you doing? We hope you are still fighting through all of these challenges. We may hearalot of bad news about the effects of COVID-19 in our country I know you are also tired of this.
မင်္ဂလာပါ အချစ်တို့ရေ ! အားလုံးနေကောင်းကြရဲ့လား။ အားလုံးလည်း ဒီကာလမှာကြုံလာသမျှတွေကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖြတ်ကျော်နေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ COVID-19 နဲ့ပက်သက်ပြီး သတင်းဆိုးတွေ အတော်များများကြားနေရလို့ အားလုံးလည်းစိတ်ပင်ပန်းနေကြပြီထင်ပါတယ်။
So, we are giving youagood news! New issue is up!
အဲ့ဒါကြောင့် OOTD က အားလုံးကို သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပေးချင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ OOTD ရဲ့ မဂ္ဂဇင်း အပိုင်းသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
It stars Hsu Pyae Nandarasublime influencer based in Yangon.
ဒီအပိုင်းသစ်မှာ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် Influencer Hsu Paye Nandar က ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
မဂ္ဂဇင်း ကို ဒီမှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် :
ဒီမှာ download လုပ်နိုင်ပါတယ် :
PS. Don’t forget to tag us when you download or read this issue!
PS. မဂ္ဂဇင်း ကို download လုပ်ပြီး၊ ဖတ်ရှုပြီးပြီဆိုရင်တော့
OOTDMYAMAR ကို tag တွဲဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
Much love, OOTDMYANMAR
Tags Fashion, myanmar, ootdmyanmar, ootdmyanmarezine